War Cusub: Siyaasiyiin Caan ah oo kasoo Dhex muuqan Doona Tartanka Doorashada Aqalka Hoose ee Hirshabeele Iyadoo Dhaqaalihii Ugu Badnaay Lagu Bixinaayo Kuraasta Aqalka Hoose – Kismaayo24 News Agency
War Cusub: Siyaasiyiin Caan ah oo kasoo Dhex muuqan Doona Tartanka Doorashada Aqalka Hoose ee Hirshabeele Iyadoo Dhaqaalihii Ugu Badnaay Lagu Bixinaayo Kuraasta Aqalka Hoose
by Tifaftiraha K24 14th November 2016 138
Tan iyo markii maamulka Hirshabeelle ay xaruntiisu noqotay magaalada Jowhar ayaa waxaa soo baxayay isbedel dhinac walba ah, waxayna magaaladu noqotay meel saxmad leh oo dad badan ay ku soo hirteen.
Markii la dhaariyay Madaxda maamul goboleedka Hirshabeelle lana ogaaday in doorashada dadban ay ka dhici doonto magaalada Jowhar, gaar ahaan xildhibaanada labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa waxaa magaaladu ay noqotay meel dadka soo galaya ay gaareen heerkii ugu sareeyay tan iyo dowladii Cabdulaahi Yuusuf oo xarun kumeelgaar ka dhigatay Jowhar.
Lacagta lagu kireeyo guryaha gaar ahaan guryaha ku dhowdhow xarumaha dowlada ayaa waxa ay gaareen heer aan hore loo arag, guriga dhagaxa ah ayaa meelaha qaar waxaa lagu kireeyay $5000 muddo bil ah halka guryaha carshaanta ah ee la degi karo kana kooban ugu yaraan saddex qol la kireynayo $1000.
Maalinba maalinta ka dambeysa ayaa waxaa soo gaaraya magaalada xildhibaano iyo ergada dooranaysa, waxaana magaalada Jowhar lagu dooranayaa 37 xildhibaan oo Aqalka Hoose ah.
Qaabka ergada loo xulayo ayaa ah tan ugu dhibka badan, iyadoo musharixiinta ay wataan ergo halka oday dhaqameedyaduna ay iyaguna wataan ergo kale.
Mid kamid ah oday dhaqameedyada gobolka Sh/dhexe caanka ka ah ayaa sheegay in aysan dhici karin in ergo laga keeno Muqdisho waayo xildhibaanka la dooranayo waa mid ka sharaxan Hirshabeelle ee ma ahan gobolka Banaadir.
Sidoo kale oday dhaqameedyada gobolka Hiiraan ayaa ku adkeysanaya in ergada wax dooranaysa ay noqdaan kuwo laga keeno gobolka Hiiraan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Ergooyinka qaar ay qorteen Xildhibaano horay, si ay mar kale dib uga doortaan, waxaana ay dejiyeen guryo gaar ah, iyagoo qarashka ka bixiyay, iyadoo dadka qaar ku tilmaameen arrintan “Adiga lee Dubo, Adiga lee daangeyso”
Xildhibaano muddo gaareysa 12 sano aan lagula tartamin kuraasta ay ku fadhiyeen ayaa haatan la kulmaya tartan adag oo ay la galayaan musharixiin ay isku hayb yihiin balse damac uu ugaga jiro kursiga ay beesha ka leedahay Aqalka Hoose.
Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa tartan adag aan fileyn oo musharaxa ay la tartamayaan ay ku yihin heshiis, halka kuwo kale ay cabsi ka qabaan in sida ku dhacday xildhibaanada Baydhabo iyo Kismaayo oo ku waayay kursigooda doorashadan dadban.
Waxaa xildhibaanada gaar ahaan kuwii hore ay fureen bangiyadooda iyadoo meelaha qaar la sheegayo in lagu gorgortamayo lix kun oo dollar halkii cod.
Qaar kamid ah xildhibaanadii hore iyo mas’uuliyiin ka mid ah kuwa dowlada ayaa ergadooda ku keenay magaalada Jowhar diyaarado halka kuwa kalana ay gaadiid ugaga soo daabuleen magaalada Muqdisho.
Ergo badan ayaa diyaarado soo raacaya magaalada Beledweyne, iyagoo intooda badan ku soo degaya magaalada Muqdisho, kadibna basas loogaga soo qaadayo Muqdisho, halka kuwa kalena diyaarado looga keenayo Muqdisho.
Mid ka mid ah ergada ayaa sheegay in tan ay u tahay fursad uu ku heli karo lacag uu ganacsi ku bilaabo uuna rajeynayo in ugu yaraan toban kun oo dollar uu ka helo doorashada.
Doorashada dadban ee la rajaynayo in dhowaan ay ka bilaabato magaalada Jowhar ayaa waxaa xiiso u sii yeelaya iyadoo kuraasta lagu tartamayo ay tahay mid ay ku xisaabtamayaan siyaasiyiinta uu horboodo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ergada musharaxiintooda ay yihiin kuwa ku xiran Madaxtooyada sida xildhibaan Faarax C/qadir ayaa ku yimid magaalada Jowhar diyaarad waxaana la dejiyay hotelada ugu qaalisan magaalada.
Xildhibaanada tartamaya ayaa waxaa ka mid yihiin Khadiijo Maxamed Diiriye, Daahir Amiin Jeesow, Xildhibaan Maxamed Xasan Qoone, Bashiir Caddow Calasow, Wasiirka Amniga C/risaaq Maxamed Cumar, Wasiiru Dowlaha Maaliyadda C/lilaahi Maxamed Nuur, C/qaadir Cosoble, Xildhibaan Ducaale, Faarax Sheekh C/qaadir iyo kuwa kale
Musharixiinta tartamaysa ayaa waxaa ka mid ah siyaasiyiin mucaarad ku ahaa dowlada oo uu ka mid yahay Salaad Cali Jeelle iyo C/dir Barnaamij, Muxiyadiin Xasan Jurus, Madiina Caamir, Drs. Mina Xasan Shibis iyo kuwa kale.
Si kasta ha ahaatee doorashada Aqalka Hosoe ayaa lagu wadaa in wajigiisa koowaad uu bilowdo maalmaha soo socda, iyadoo 13 kursi lagu tartami doono.
Akhriso: Waqtiga Rasmiga ah ay Bilaaban doonto Doorashada Aqalka Hoose ee Hirshabeele oo la shaaciyay
Tifaftiraha K24 26th April 2017 26th April 2017
AKHRISO:- Aqalka Sare oo dalbaday in la horkeeno Afar kamida Wasiirada Xukuumadda Kheyre
Ahmed sudani 24th March 2018
Daawo Sawirro: Alshabaab oo Dagmada Jilib ku soo Bandhigtay Maydadka Askar Kenyaan ah iyo Baabuur Dagaal
Tifaftiraha K24 25th September 2016 25th September 2016